Mukulaal caan ku ah Hilibka Highlander | Bisadaha Noti
Bisadda Highlander bisada
Highlander waa kubad qurux badan oo kalgacal leh oo dhogor ah oo awood u leh inay ku guuleysato qoyska oo dhan maalmo yar gudahood. Waa xayawaan jecel inuu udub dhexaad u ahaado oo ay siiyaan kalgacal fara badan, sidaas darteed waa wehelka ugu habboon ee loogu talagalay dadka keligood nool ama raba inay gurigooda ku noolaadaan si dhoollaysan.
In kasta oo ay tahay nooc isku dhafan, haddana waa inaadan ka walwalin waxna maadaama ay tahay doofaarro si wanaagsan ula qabsaneysa ku noolaanshaha guriga gudihiisa.
1 Asalka iyo taariikhda Highlander
3 Dabeecadda Highlander iyo shakhsiyadda
4.4 Kalgacal iyo shirkad
5 Immisa ayey ku kacaysaa bisadda Highlander?
6 Sawirada bisadda Highlander
Asalka iyo taariikhda Highlander
Halyeeygeena waa doofaaris lagu abuuray Mareykanka 1995, markii bisad eyda Curl Mareykan ah ayaa la soo gudboonaaday lynx. Waxay u badan tahay in qashinkii ugu horreeyay ee kittens ay ku dhasheen jirka hooyada laakiin astaamaha aabbaha, sidaa darteed isla markii ay gaboobaanba waxaa lagu tallaabay noocyo kale oo bisado ah oo loo yaqaan 'Curl cat cat' si ay uga dhigaan kuwo dabacsan.
Toban sano ka dib, 2005, TICA waxay ka diiwaan gashan tahay noocyadan noocyada cusub ee hordhaca ah.
Bisadan waa xayawaan weyn: culeyska labku waa 6 ilaa 9kg halka dhaddiguna 4 ilaa 6kg. Waxay leedahay jir muruq iyo dherer ah, oo lagu daboolay lakab timo ah oo dherer ama gaabnaan kara iyo midab kasta. Madaxa waa cabir dhexdhexaad ah, iyadoo indhaha ay sidoo kale dhexdhexaad yihiin oo leh qaab oval ah. Dhegaha waa weyn yihiin, waana laalaaban yihiin, waxay u eg yihiin Curl Mareykan ah.
Lugaha si fiican ayaa loogu dheelitiray jirka intiisa kale; kuwa gadaal waxyar ka dheer kuwa hore. Dabada ayaa khafiif ah oo gaaban, dhererkeeduna yahay shan sentimitir.
Dabeecadda Highlander iyo shakhsiyadda
Waa finiin, si fudud loo jeclaan karo. Isagu waa mid aad u macaan, naxariis badan, ciyaar badan, xiise badan oo jecel inuu waqti badan la qaato aadanaha.. Waxaa intaa dheer, xitaa waxay saaxiib la noqon kartaa labada carruur iyo xayawaan kaleba. Waxaa xusid mudan inuusan u adkeysan karin inuu keligiis waqti qaato, marka waxaa lagama maarmaan ah inuu markasta qof ag joogo.
Waa inuu cunaa hilib (ha ahaado casaan ama buluug), isagoo ah xayawaan hilib cun ah. Sababtaas awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad iska ilaaliso bixinta quudinta hodanka ku ah badarka, in kasta oo ay aad u jaban yihiin, ma siin doonaan dhammaan nafaqooyinka aad runtii u baahan tahay. Noocyada ugu talo bixinta badan waxaa ka mid ah Applaws, Orijen, Acana, ama True Instinct High Meat iyo kuwo kale.
Beddelka wanaagsan ee quudinta waa Yum Diet, iyo Barf Cuntada. Tan dambe shaki la'aan waa tan ugu fiican, ilaa inta la raacayo talooyinka xirfadle ee quudinta cuncunka. Waana taas, haddii ay ka dhinto nafaqo qaar, caafimaadka xubinta caafimaadka waxay ku jiri kartaa khatar daran.
Pelo: haddii aan xisaabta ku dareyno inuu gaaban yahay, oo isaguna uu ka taxadarayo inuu marwalba nadiif ahaado, kaliya waa inaad cadayato maalin kasta.
Ilkaha: laga soo bilaabo eey-nimada waxaa lagugula talinayaa inaad laqabsato cadayga ilkahiisa, maadaama sidan sidan ay ku sii dheeraanayaan.
Indhaha: Haddii aad aragto inay leeyihiin legaas, waa inaad ku saartaa faashad.
Dhegaha: marba marka ka dambeysa baari, oo haddii aad aragto inay soo kordhayaan wax badan, ku nadiifi dhibco cayiman oo dhakhtarka xoolaha kuu sheegayo.
Hase yeeshee, caafimaadkiisu wuu wanaagsan yahay Waa inaad u kaxaysaa si loo baaro haddii aad aragto inuu si lama filaan ah u bilaabay inuu cuno wax ka yar sidii caadiga ahayd, uu qandho qabo, ama aad ka shakisan tahay inuusan caafimaad qabin. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad sidoo kale u qaadataa si aad u hesho tallaalada khasabka ah inta lagu jiro sanadka ugu horeeya nolosha, iyo sidoo kale tallaalada xoojinta sanadlaha ah; microchip sidoo kale waa in lagu beero.
Jacaylka iyo shirkadda Waa wax aan u baahnayn in maalin uun la waayo. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in si wanaagsan looga fikiro haddii aad awood u yeelan doonto inaad daryeesho bisad Highlander ah, maxaa yeelay haddii hadhow ay u soo baxdo in aysan sidaas ahayn, xayawaanka dhibka ugu xun la kulmi doona wuxuu noqon doonaa.
Haddii aad go'aansato oo aad diyaar u tahay inaad daryeesho, waxaan hubnaa in goor dhow ama goor dambe aad ka dhigi doontid inuu noqdo saaxiibkaaga cusub ee afarta lug leh.
Immisa ayey ku kacaysaa bisadda Highlander?
Haddii aad ku riyootid inaad la noolaatid bisad qurux badan oo Highlander ah, raadi maqaaladda oo u muuqata mid dhab ah oo kalsooni kugu abuureysa. Ha ku degdegin wax badan. Markii aad mid hesho, waqti la qaado kittens-ka, weydii wixii su'aalo ah ee soo kordha, isla marka aad cadaatoba, soo iibso eey yar oo qalbigaaga qabsaday. Qiimuhu waa 800-1000 euros.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in laga helo dukaanka xayawaanka, halkaas oo qiimaha ka hooseeyo. Laakiin waa inaad ogaataa in ku iibsiga halkaas ay leedahay cillado, maadaama tusaale ahaan aadan awoodi doonin inaad la kulanto bisadda waalidkeed ama wax ku saabsan caafimaadkeeda.
Sawirada bisadda Highlander
Si aan u dhammaystirno, waxaannu kuu daayeynaa sawirro taxane ah oo ah bisaddan quruxda badan:
Sawir - Petpaw.com.au
Sawir - Omlet.co.uk
Sawir - Doglib.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadda Highlander bisada
Immisa ayey ku kacaysaa in bisad diyaarad lagu raaco
Maxaa la sameeyaa haddii bisadaydu kuleyl ku jirto